HALKAN KA AKHRISO: Wasiir Ka Tirsan Xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo oo Aqoon-darro ku Canaantay Beeralayda reer Somaliland | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM HALKAN KA AKHRISO: Wasiir Ka Tirsan Xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo oo Aqoon-darro ku Canaantay Beeralayda reer Somaliland
August 15, 2016 - Written by admin
Hargeysa (Hubaal)- Wasiirka wasaaradda beeraha Somaliland Maxamed Aw Daahir Ibraahim ayaa ugu baaqay beeraleyda dalka in ay ka faa’iidaystaan dedaalka xukuumadda ee horumarinta Beeraha, isla markaan ay kor u qaadaan heerkooda aqooneed ee dhanka tacabka beeraha.
Wasiirku waxa uu sheegay in aqoon darro ka jirta dhinaca beeraleyada qaarkeed ay saamayn weyn ku yeelatay wax soo saarkii guud ee beeraha dalkeenna, waxaanu wasiirku sidaasi ka sheegay tabobar ku saaban sidii dib loogu soo celin lahaa isticmaalka siidhadhka dabiiciga ah ee beeraha, kaas oo ka furmay magaalada Hargeysa. Maxamed Aw Daahir waxa kale oo uu sheegay in beeraleyda qaarkeed aanay sidii ku habboonayd uga faa’iidaysan dadaalkii xukumadda iyo hay’addaha la shaqeeyaa ay galiyeen horumarka beeraha, isagoo arrintaa ka hadlayayna waxa uu yidhi “Tacabkii badnaa ee ay xukuumadda iyo hay’addaha ka taageera dhanka beeraha geliyeen, beeralayda qaarkeed ugamay faa’iidaysan sidii la rabay. Tabobarkan waxa labada maalmood ee uu socdo aad ku qaadan doontaan ama ku baran doontaan, saamayn weyn ayay ku yeelatay wax oo saarkii dalka. Waxaaan guud ahaan dadka beeraleyda ah ugu baaqayaa in ay kor u qaadaan heerkooda qooneed ee dhanka beeraha.”
Wasiirka beeruhu mar uu ka hadlaayay saamaynta ka dhalan karta hoos u dhac ku yimaada aqoonta beeraleyada waxa uu yidhi “Aqoon darrada cilmiga beeruhu waxay keentay in beeraley badani ay siidhka meel uun ku shubaan si aan aqooni la socon, ka dibna ay arkaan waxa uga soo baxa iyo waxa ka khasaara. Badi dadkaasi tacab dambe ma galiyaan beerahooda umana daryeelaan sidii loo baahnaa.”
“Dadkii waxa ka guurtay aqoontii beeraha, dhulkii ay ka dhaxleen awoowyadood way hayaan. Laakiin nasiib darro aqoontii ay dadkaasi u lahaayeen beeraha kamay dhaxlin.” Ayuu yidhi Wasiirku, mar uu ka hadlaayay faraqa u dhexeeya dadkii hore ee beeraleyada ahaa iyo kuwa hadda jooga qaarkood.
Agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Eng. Cabdilaahi Ismaaciil Faarax oo tabobarkaas ka ka hadlay ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyay waxyaabaha lagu baran doono tabobarkan, isagoo arrintaa ka hadlayayna waxa uu yidhi “Waxyaabaha muhiimka ah ee aad casharrada tabobarka ku arki doontaan waxa kale oo ka mida in aynu dadka beeraleyda ah gaadhsiino qaabka wax loo beerto, sida ciida iyo biyahaha loo dhaqaaleeyo iyo sida beerta looga ilaalin lahaa xanuunada ku dhaca beeraha ee ay cayayaanku keenaan.”
Tabobarkan ayaa waxa iska kaashaday wasaaradda beeraha iyo Hay’adda FAO, mudada uu socdana waxa shaqaalaha wasaaradda lagu bari doonaa aqoon la xidhiidha beeraha, siiba adeegsiga haboon ee siidhadhka dabiiciga ah. Wasaaradda beeraha Somaliland ayaa mudooyinkii u dambeeyay waxay ku hawlanayd sidii kor laagu qaadi aqoonta shaqaalaha wasaaradda beeraha, si loo helo dad xirfad iyo aqoonba u leh culuumta beeraha oo wax sii bara dadka beeraleyada ah.